ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : မဲအရေအတွက် ပါ သမ္မတအသစ်ကို ထင်ပါလား?
မဲအရေအတွက် ပါ သမ္မတအသစ်ကို ထင်ပါလား?
ဒီနေ့ ညနေ လောက်ဆိုရင် အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ အဖြေထွက်ပါပြီ သမ္မတအိုဘားမား က ဘဲ အခုမဲတွေနိမ့်နေပါတယ် အသစ်စက်စက် သမ္မတလောင်း မစ္စတာ Romney
အခု ဂျပန်တီဗွီမှ တိုက်ရိုက်စာရင်းအရ သမ္မတအိုဘားမား က128 မဲ သမ္မတလောင်း မစ္စတာ Romney 149 မပြီးသေးပါဘူး
တဲ့ နာရီနှင့်အမျှ မဲတွေပြောင်းနေပါတယ်။ ဒီညနေဆို သိရပါပြီ။ ဂျပန်သတင်းအရဖော်ပြပါတယ်။7.11.2012 11နာရီ17မိနစ် စာရင်းအရ ယခုဂျပန်သတင်းအရ အိုဘားမား၁၄၈ မဲ Romney၁၅၃မဲ ရပ်နေပါတယ်
ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ ။
သမ္မတအသစ်ကို ထင်ပါလား။ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မပြီးသေးပါဘူး
အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ အခုမဲစာရင်းအရ သမ္မတအိုဘားမား က157 မဲ သမ္မတလောင်း မစ္စတာ Romney 162 မပြီးသေးပါဘူး ဂျပန်အချိန်12.03am